Ukuhlala nezitulo - China Gormeet Plastic
Igalelo inqubo yokubumba nazo kabanzi ukusebenzisa izihlalo esikhiqiza, imikhiqizo abangu ukuzinza zamakhemikhali, acid, anti-static, abandayo & ukushisa ukumelana, umbala ukuzinza, kulula ukufaka bese uphatha. Kukhona ikakhulukazi izinhlobo ezimbili imikhiqizo yethu: izihlalo ingane emotweni, ukusetshenziswa ezivamile izihlalo. Baby imoto izihlalo, booster izihlalo Kungakhathaliseki kuhambo esifushane noma uhambo olude, izihlalo imoto izinto ezibalulekile izingane, izihlalo ingane ukuphepha babebhekwa njengezinhlanya enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokuvimbela ukuba izingane ngokuzumayo ukulimala ...
Igalelo inqubo yokubumba nazo kabanzi ukusebenzisa izihlalo esikhiqiza, imikhiqizo abangu ukuzinza zamakhemikhali, acid, anti-static, abandayo & ukushisa ukumelana, umbala ukuzinza, kulula ukufaka bese uphatha.
Kukhona ikakhulukazi izinhlobo ezimbili imikhiqizo yethu: izihlalo ingane emotweni, ukusetshenziswa ezivamile izihlalo.
Baby imoto izihlalo, izihlalo booster
Kungakhathaliseki kuhambo esifushane noma uhambo olude, izihlalo imoto izinto ezibalulekile izingane, izihlalo nokuphepha kwengane babebhekwa njengezinhlanya enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokuvimbela ukuba izingane ngokuzumayo ukulimala ezingozini zomgwaqo.
Sinikeza imoto izihlalo bonke ubudala, kusuka usana imoto izihlalo ezihlalweni booster eyenzelwe izingane ezindala.
· Ezenziwe HDPE yasekuqaleni
ukujiya Uniform futhi crashworthiness eqinile
Okuphakathi nendawo kuya eliphezulu yamangqamuzana, nge kahle umthelela ukumelana
Angakhiqiza Uhlaka plastic kuphela, noma inhlangano yonke izingxenye ukwakha imikhiqizo siphelile.
Sebenzisa Evamile nezitulo
Thina ngokwezifiso esihlalweni isakhiwo ngokuvumelana umsebenzi udinga, ngibenze un-zikhubazekile ukuze uvumelane ukuze ubone ezinye ingxenye imikhiqizo, isibonelo, handrails, backrests nokunye. inqubo yethu kungaba abalawula usayizi ngesikhathi ukukhiqizwa ngaphakathi tolerances ovumelekile, futhi ngaso sonke isikhathi senze kahle ukulawula imibala phakathi amaqoqwana ezahlukene.
Nezitulo kungenziwa textured evele & Zihlukahlukene ngesimo, ezinobukhulu, imibala & ayinkimbinkimbi.
Izinto kuhlanganise kodwa kungagcini:
Amasevisi kuhlanganise kodwa kungagcini:
· Isikhunta yokukhiqiza
· Mkhiqizo isithuthukisi
· Ukugcwaliseka kwemisebenzi asizayo
· OMhlangano nasemaHholo emaphaketheni
· Lokuthumela Direct kumuntu wesithathu